Umkhuleko kuSanta Muerte Wothando Olungenakwenzeka. ? + Kuyasebenza
Umkhuleko wokucela ukufa okungcwele uthando olungenakwenzeka Ungathola ukuthi uphile lolo thando olufuna kakhulu noma ulethe lowo muntu okhethekile osuke ngenxa yesizathu esithile noma kwesinye.
Ungathemba ukuthi le-Saint inamathuluzi adingekayo okunqoba esikuthatha kalula.
Anganikeza impilo imizwa efile noma ayenze ivele ezinhliziyweni ezomile nezomile kunazo zonke ezikhona.
1 Uyini umthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka?
1.1 Umkhuleko wokucela ukufa okungcwele uthando olungenakwenzeka
2 Ingabe lo mthandazo unamandla?
Uyini umthandazo kuSanta Muerte wothando olungenakwenzeka?
I-Las imithandazo Basebenzela noma yini ofuna ukuyi-oda.
Kulokhu kungenxa ye thola uthando ngempumelelo.
Umdali uNkulunkulu uBaba usifundisa ngemibhalo engcwele ukuthi uhlose ukusiza wonke umuntu osondela kuye futhi singasondela kuye ngomthandazo oqondile noma kunoma yimuphi usanta.
La Santa Muerte Kuba yilungu lethu ezindabeni zenhliziyo nemizwa.
Izindlela ezisetshenziselwa ukusinika izicelo aziqondakali kepha uma zaziwa zinamandla amakhulu, isimangaliso senzeka ngokushesha nangendlela efanele.
Umkhuleko wokucela ukufa okungcwele uthando olungenakwenzeka
Oh Ukufa Okungcwele
uthando lungqongqoze emnyango wami, kodwa othandekayo uSanta Muerte,
Uye waziphatha kabi kakhulu, ngidikibala ngoba ngiyathanda futhi angiyimi.
Ukuhlupheka kokungasizakali kuyangibamba lapho ngibona ukuthi anginazo izandla zami isixazululo senkinga yami, ngiyakuncenga ngokudabuka okukhulu ukuze uzwe umkhuleko wami, ngithemba ukuthi uyalalela futhi uzwe ukuthi ukushaywa kwami ​​lapho kukhuluma intombazane yami emhlophe, Umuntu engimthandayo uluthando olungenakwenzeka kodwa ngifuna isimangaliso sokuba naye asondele eceleni kwami, ukuthi kungenzeka ukuthi yingakho ngiza kuwe, ukuthi unomusa futhi uyisimangaliso.
Ngifuna lowo muntu abe ngumlingani wami futhi abuyiselwe ngalo lonke uthando lwayo, ngizokubonga futhi ngayo ngiyikholwa elithembekile lesivumokholo sakho.
Ngizokunxusa isikhathi esidingekayo sokuthi isicelo sami sigcwaliseke ngenkathi ngilindile, ngizofakazela ubuqotho bami ngokunikela ngeminikelo yami isikhathi eside kuwe Ukufa kwami ​​othandekayo okubusisiwe.
O, Dadewethu oMhlophe, ngiyakwethemba futhi ngibeka lonke ukholo lwami kuwe, ngithemba ukuthi uzongilalela futhi ufeze isifiso sami. Ngakho makube njalo.
Lokhu umkhuleko wothando USanta Muerte uyisimangaliso!
Thanda futhi ungabuyiselwa Ngenye yezinhlupheko ezinkulu ezihlupheka hhayi namuhla kuphela kepha kusukela ekuqaleni kwesikhathi.
Izikhathi eziningi sizethemba ngokweqile ukuthi izinto zihamba kahle kumlingani wethu futhi siyamangala lapho sizilahlekisela.
Kungaleso sikhathi lapho lo mkhuleko uba isikhali sethu esiyimfihlo esingasisiza ukuba siphumelele impi yothando oluqinile, oluyiqiniso nolunempilo yonke.
Yebo, inamandla amakhulu, ikakhulukazi uma kwenziwa ngokukholwa okusuka enhliziyweni.
Ezinye izincomo zokwenza lo musho uphumelele kakhulu dala i-altare elikhethekile ekhaya lethu esinezinto ezimbili kuzo amakhandlela abomvu namhlophe, rose elimhlophe nelibomvu lihlangene nezithombe ezintathu zomuntu omthandayo.
Ungabhala futhi negama lomuntu eceleni kwesethu nomusho omfushane okhethekile kepha okubaluleke kakhulu ukukholelwa njalo.
Ngaso sonke isikhathi kholwa emandleni omkhuleko ku-Holy Black Dead ukuthola uthando olungenakwenzeka.
Umkhuleko onamandla wokungifonela